10-ka kulan ee ugufiican ee saaxiibada lagula ciyaaro kombiyuutarka | Golaha Moobaylka
Ciise Sanches | | Ciyaaraha
Ciyaaraha fiidiyowga had iyo jeer waa ka xiiso badan yihiin haddii aan la ciyaarno saaxiibbadeen. Maanta, waxaan la hadli karnaa kuwayaga kooxda makarafoonka ku dhageyso iyaga adoo adeegsanaya sameecadaha dhagaha. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan kulan uu kula ciyaaro asxaabta kombiyuutarka, dhammaan noocyada. Maanta waxaan sameyn doonnaa a liiska 10ka sare.
Maanta, waxaa jira ciyaaro badan oo kaladuwan oo badan oo loogu talagalay kombuyutarka kaas oo aad waqti fiican kula qaadanaysid asxaabtaada, kaligaa ama shisheeyaha. Hoos waxaad ka arki doontaa liiska kuwa aan u maleyno inay yihiin 10-ka sare:
4 League of warkii
7 Goobaha Guud
9 gantaal League
10 Xatooyo Xatooyo Auto Online
Tan iyo markii la bilaabay Maarso 2020, Wicitaanka Waajibaadka: Warzone wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu caansan ciyaaraha fiidiyoowga ah ee bulshada dhexdeeda. Tani waa sababta oo ah waad ciyaari kartaa ilaa afar saaxiib isla mar ahaantaana hababka ciyaarta ee kala duwan iyo, marka lagu daro, Waa lacag la’aan.
The Battle Royal ayaa lagu daray cusbooneysiinta joogtada ah taas oo sababtay in ciyaartoyda aysan ka daalin ciyaarta. Khariidado cusub, qaababka ciyaarta, hub cusub, hawlwadeenno cusub ... Si kastaba ha noqotee, wax walba maaha dahab dhalaalaya. Qaar badan oo ka mid ah isagana waxay ka cabanayaan dhowr cayayaanka ama cilladaha ciyaarta taasi waxay umuuqataa inaysan lahayn wax hagaajin ah (ugu yaraan muddada gaaban).
Si kastaba ha noqotee, Warzone waxay kujirtaa liiskan maxaa yeelay waxay dhaaftay Battle Royals kale sida Fortnite ama Fall Guys. Waxaa jira malaayiin dad ah oo maalin walba ciyaaraya fiidiyowgaan, mana ahan wax lala yaabo gabi ahaanba. Mid ka mid ah furayaasha guusha (oo Fortnite horey u sameeyay), waa si firfircoon u dhageysta bulshada.
Intaa waxaa dheer, ka Xilli Warzone 2 trailer, cusub xilli taasi wax badan ayey balan qaadaysaa. Hawl wadeeno cusub, hub cusub, qaabab ciyaareed cusub, iyo khariidad cusub? Ku 25 ee bisha February waan ogaan doonaa.
Minecraft waa mid kamid ah cayaaraha ugu caansan taariikhda videogames, qaasatan fursadaha aan dhammaadka lahayn waxaa bixiyay ciyaartan. Isticmaaluhu wuu ciyaari karaa qaab kasta oo ciyaar ah, kaligiis ama ku hareereysan saaxiibbadiis. Waxaa jira qaabab badan oo ciyaarta nooc kasta leh, tacabur ayaa la damaanad qaadayaa.
Waxa kale oo aad abuuri kartaa a khariidada lala wadaago asxaabtaada oo bilow inaad abuurto adduun kuu gaar ah: guryo, harooyin, dhismayaal, daryeelka xoolaha, beero beertaada, la dagaallanka cadowga, booqashada tuulooyinka tuulooyinka, iwm. Sikastaba, qof kastaa wuu ogyahay Minecraft, shaki la'aanna waa ikhtiyaar aad u fiican inaad la baashaalato asxaabtaada.
Counter-Strike waxay leedahay taariikh aad u tiro badan oo xitaa ay cay ku tahay in lagu sifeeyo ciyaartan. Shaki la'aan, CS: GO wuxuu ka mid noqonayaa rasaastu ugu fiican bulshada dhexdeeda gamer. Shaki la'aan, waa xulasho qumman haddii aad rabto Waqti la wadaag saaxiibbadaa xiisad, ficil iyo tartan.
Ciyaartu waa mid aasaasi ah: laba koox oo min shan ciyaartoy ah (Argagixiso iyo Argagixiso ladagaalama) ayaa is horfadhiya. Argagixisadu waa inay ku aasaan oo qarxiyaan mid ka mid ah labada qodob (A ama B) Argagixisada La Dagaalanka Argagixisadana waa inay ka fogaadaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira habab badan oo ciyaarta ah (2 ka dhanka ah 2), (dhammaantoodna ka dhan ah).
CS: GO wuxuu noqday mid caan ah oo kasbaday taageerayaal badan sanadihii la soo dhaafay sababo la xiriira kuwa caanka ah hargahood. Ama maxaa la mid ah, sanduuqyada fur oo sug hub leh naqshad gaar ah ama mindi wata StatTrack. Suuqa loogu talagalay hargahood ayaa qarxay, qaar kood ayaa ku kacaya ilaa 20.000 €. Haa, fudud pixels
League of Legends waa inuu ku jiraa liiskan, mana ahan wax ka yar, mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan ciyaaraha badan ee bulshada dhexdeeda. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah cinwaannada ugu guulaha badan adduunka oo waliba leh a bulshada tartanka mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka.
Ciyaarta fiidiyowga waa mid aad u balwad leh, waxaad ku qaadan kartaa saacado aad ku ciyaareyso xitaa ma ogid. Iyo waxa ugu fiican oo dhan waa inaad awoodid la ciyaar asxaabtaada. Waxaad dooran kartaa dad badan oo jilayaal ah ama horyaallo ah (140 horyaal) oo leh karti gaar ah midkiiba. Dhamaanba waxa ugu fiican, ciyaarta ayaa ah bilaash ah
Hadaad jeceshahay istaraatijiyad, kani waa ciyaartiina. Ciyaartu sidoo kale waa wax iska fudud: waa laba koox oo ka kooban shan horyaal oo is wajihi doona si loo arko cidda marka hore burburinaysa saldhigga kale. Waxaad ubaahan doontaa kartidaada, caqligaaga iyo qalafsanaantaada si aad u guuleysato.
Haddii aad ku nooshahay dhagax hoostiisa, laga yaabee inaadan aqoon Dhexdeenna, mid ka mid ah ciyaaro badan oo ciyaartoy badan ay ciyaaraan bulshada inta lagu jiro sannadka 2020. Ciyaartan xiisaha leh waad awooddaa aad ula qosla saaxiibbadaa, halka ay ka ciyaari karaan sida 4 in 10 qof markiiba.
Waxaad ku jirtaa khariidad (badiyaa markab) oo shaqaalaha kale lasocda waana inaad fulisaa hawlo taxane ah inuu guuleysto. Si kastaba ha noqotee, wax walbaa ma sahlana. Dhexdiinna ayaa jiri doona 2 dilaa si aan kala sooc lahayn loogu doortay bilawga ciyaarta oo ay tahay inuu dilo inta kale ee shaqaalaha ah iyadoo aan la ogaan.
Markii gacan ku dhiigle uu dilo qof ka mid ah shaqaalaha, maydkiisa wuxuu ku sii jeedaa meeshuu ku dilay, si ay u ogaadaan qof kale oo shaqaalaha ka mid ah. Waqtigaan, badhan ayaa la hawlgeliyaa iyo dadka oo dhan ku kulan miiska si looga doodo cidda uu yahay gacan ku dhiigluhu. Waa inay ku murmaan meesha ay joogeen iyo waxay sameynayeen. Cod ayaa la bilaabay oo xubnihii shaqaalaha ee ugu cod badnaa ayaa laga eryay markabka ama wareega ayaa laga booday oo cidna lama cayrinayo.
El Shooter multialoyer Valorant wuxuu ku dhashay ujeedada wax ka siinta wax yar oo ka badan tan CS: GO horeyba u bixisay, sharad cusub oo casri ah oo ku saabsan waxa rasaastu waxay ka dhigan tahay. Waxaa u waxyooday a dunida mustaqbalka, markaa waxaad ka heli doontaa hubka mustaqbalka iyo jilayaal leh karti gaar ah oo gaar ah.
Ciyaartu waxay la mid tahay Counter-Strike, waxaa jira laba koox oo ka kooban min 5 ciyaartoy, qaar baa weerara oo bambo dhiga, kooxda kalena waxay isku dayi doontaa inay joojiso. Ku guuleystaha waxaa lagu qeexay labada koox ee ugu fiican 24 wareeg. Haddii aad jeceshahay toogashada ciyaaraha sida CS: GO, Valorant waa a ikhtiyaar aad u fiican oo aad kula midoobi karto asxaabtaada oo aad u burburin karto kuwa kula tartamaya.
Fall Guys waa mid kale oo ka mid ah ciyaarahaas intii lagu jiray xabsigii ugu horreeyay ee sababay COVID-19 faafiyey wax badan. Waa Dagaal Royal ah kaas oo wadar ahaan 60 jugadores Iyagu waa inay noqdaan kuwa ugu dambeeya ee ka haray wareeg kasta illaa ay ka hadhaan mid keliya. Waxaad awoodi doontaa inaad ku marto koorsooyin caqabad ah, u maleyso wadada saxda ah, inaad ku booddo dhufto ee xirfaddaada ugu fiican, aad la ciyaarto ciyaaro kubbadda cagta ah, iwm.
Xaqiiqdii waa ciyaar aad u qosol badan kaas oo aad kula ciyaari karto asxaabtaada isla kooxda. Wadajir, waa inaad sameysaan wax kasta oo suurtagal ah si ugu yaraan midkiin uu u noqdo badbaadaha ugu dambeeya sidaasna uu yahay hel taajkii.
FIFA had iyo jeer waa ikhtiyaar aad u fiican la qosol asxaabtaada oo arag cidda ugu xirfadda badan gacmahooda. Waa ciyaar aad caan uga ah bulshada xukunta (Play Station iyo Xbox), laakiin sidoo kale waxaa lagu ciyaari karaa kombuyuutarka dhib la'aan.
Ciyaaraha kubada cagta ee ugufiican PC taariikhda oo dhan
Ciyaar tartamo degdeg ah kooxo sida Madrid ama Barcelona ama kooxdaada ku abuuri Kooxda Ultimate oo muuji inaad ka fiican tahay Tababaraha kooxda ka badan saaxiibkaa. Iyo, haa, gool ayaa la dhaliyaa, ha ilaawin u dir inuu aamuso ee dabaaldega yoolka, in marwalba kan kale uu ku duro.
Shaki la'aan, mid ka mid ah ciyaarihii fiidiyowga ee asalka ahaa uguna fiicnaa sanadihii la soo dhaafay. Ka soo gawaarida iyo kubada cagta oo isku dhafan Rocket League ayaa dhashay, ciwaan aad u xiiso badan oo xiise leh meesha aan awoodno la ciyaar saaxiibbadeen oo arag cidda dhalisa goolasha ugu badan adigoo riixaya kubbadda weyn ee baabuurkooda.
Waa run hadii aad maqasho ugu horeyn waxaad u maleyneysaa in ciyaartan aan adiga aheyn, maalin walba ma maqasho inaad kubad ku ciyaari karto gawaari, laakiin waa. Iyo, shaki la'aan, Rocket League ayaa kaa yaabi doona, waxaad yeelan doontaa baashaal fara badan waxayna kaa dhigi doontaa waqti fiican haddii aad keligaa ama saaxiibbadaa la ciyaarto.
Xatooyo Xatooyo Auto Online
Ugudambeyn laakiin uguyaraan waxaan haynaa GTA Online, oo ah sheekooyinka laga soo qaado Ciyaaraha Rockstar. Shaki la'aan, ka multiplayer oo hela casriyeyn joogto ah waa mid ka mid ah cayaaraha ay jecelyihiin bulshada dhexdeeda. Tani waa sababta oo ah waxay ku siisaa fursado aan dhammaad lahayn ciyaartaada. Waad ku mahadsantahay cusbooneysiinta iyo ka mid noqoshada waxyaabaha cusub, marwalba waxaad kaheleysaa lama filaan cusub, macno ahaan wax walba waad sameyn kartaa.
New DLC, ballaadhinta cusub, waxqabadyada, khariidadaha, baabuurta, hubka ... Tani waxay haysaa ciyaartoy badan oo ku xidhan kuwaas oo doonaya inay wakhti fiican la qaataan saaxiibadood. Burburi ama socod ku mara waddooyinka Los Santos. Dhul, bad ama hawo, sidaad rabto.
Intaa waxaa dheer, ciyaarta turubka ayaa noqotay mid caan ah. GTA Doorka Ciyaarta, server u heellan ciyaartoyda doonaya door-ciyaar ciyaarta, taas oo ah, in laga dhigo inay dhab ahaan ciyaarta ku jireen. Shaqo raadso, lacag kasbato, saaxiibo sameyso ama rafiiq wadaag. Runtii, waxay umuuqataa inaysan lahayn dhamaadka ama dhicitaanka taariikhda Xatooyo Awoodda Leh ee Internetka.
Laga soo bilaabo fekerkeenna hooseeya kuwani waa kuwa 10 kombiyuutar ee ugu wanaagsan ee aad la ciyaarto asxaabtaada, waxaad leedahay noocyo kala geddisan, ficil, riwaayad, isboorti, door-ciyaar, istiraatiijiyad, xirfad, madal, iwm. Adiguna, ma u xiisay cinwaan cayiman? Waan ku farxi doonnaa ku aqri faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » 10-ka kulan ee ugufiican ee lagula ciyaaro asxaabta kombiyuutarka
5 siyaabood oo shaashada looga qaado Windows-ka